'घुमफिरले रिफ्रेस गराउँछ' - Naya Patrika
‘घुमफिरले रिफ्रेस गराउँछ’
यात्रा वार्ता :
पर्यटनमा सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ । पर्यटकलाई नेपालका सुन्दर ठाउँहरू घुमाउने काम गर्नुहुन्छ । तर, आफैँचाहिँ कत्तिको घुम्नुहुन्छ ?
म घुमफिर गर्न असाध्यै रुचाउँछु । समय मिलाएर घुम्न निस्किन्छु । घुमफिर गर्दा इन्ज्वए पनि हुन्छ, रिफ्रेस पनि भइन्छ । काममा पनि स्फूर्ति बढ्छ । मलाई देशका कुनाकाप्चा पुग्न मन लाग्छ । सुगम ठाउँमा भन्दा दुर्गम ठाउँतिर गइरहन मन पराउँछु । नेपाल साह्रै सुन्दर छ, सुन्दर ठाउँहरूले मोहित बनाउँछ । मलाई एडभेन्चर टाइपको घुमफिर बढी मनपर्छ ।
सिएन पाण्डे, अध्यक्ष नाट्टा
वर्षमा कति ठाउँ पुग्नुहुन्छ ?
नेपालका कतिपय ठाउँमा नियमित गइरहन्छु । लुम्बिनी, पोखरा, चितवन, बर्दिया नियमित गइरहने ठाउँ हुन् । वर्षमा तीन/चारपटक अलग्गै ठाउँमा पनि घुम्न जान्छु । कतिपय ठाउँमा बिजनेसकै सिलसिलामा पुगिन्छ । कतिपय ठाउँमा परिवारसँग पनि घुम्न गइन्छ । हामी व्यवसायीहरू मिलेर नयाँ–नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरू खोज्दै पनि हिँड्छौँ ।
नेपालको कुन–कुन ठाउँमा पुग्नुभयो ?
म धेरै ठाउँ पुगिसकेको छु । पोखरा, लुम्बिनी, चितवन, बर्दिया नियमित गइरहन्छु । अन्नपूर्ण भेग पूरै घुमेको छु । रारा, मुस्ताङ, लाङटाङ, एभरेष्ट बेसक्याम्प पनि पुगेको छु । नवलपरासीको बाघखोर गएको छु । नेपालको पूर्वी भेगमा भने धेरै घुमेको छैन । अब समय मिलाएर घुम्न जान्छु ।
कस्ता ठाउँमा बस्न रुचाउनुहुन्छ ?
म घुमफिरमा निस्कँदा होमस्टेमा बस्न रुचाउँछु । विदेशीसँग काम गर्ने भएकाले ठूला होटेलमा त यत्तिकै पनि बसिएको हुन्छ । तर, आफैँले छनोट गरेर बस्नुपर्दा होमस्टे रोजाइमा पर्छ । होमस्टेमा पारिवारिक वातावरण हुन्छ । हस्पिटालिटी पनि पारिवारिकखालकै हुन्छ । मलाई त्यस्तो खालको वातावरण मनपर्छ ।
तपाईंलाई सबैभन्दा बढी मनपरेको ठाउँ कुन हो ?
अन्नपूर्ण क्षेत्रको तारिफ गरेर सकिँदैन । यो क्षेत्र धेरै मनपर्छ । धेरैपटक घुम्न गइसकेको छु । अन्नपूर्ण क्षेत्र सुन्दर छ । धेरै चित्ताकर्षक ठाउँहरू छन् । हिमाल, नदी, घाँसेमैदान, मरुभूमि एउटै ठाउँमा देखिन्छ । त्यहाँ मौलिक कल्चर छ । नेपाल आउने धेरै पर्यटक अन्नपूर्ण पुग्छन् ।
विदेश भ्रमण कति देशमा गर्नुभयो ?
म करिब दुई दर्जन मुलुक पुगिसकेँ । युरोप, अमेरिका र एसियाका धेरै मुलुक पुगिसकेको छु । कतिपय विदेश भ्रमण बिजनेसकै सिलसिलामा हुन्छ । परिवार लिएर पनि विदेश भ्रमणमा जान्छु । कतिपय समयमा बिजनेस र पारिवारिक भ्रमण एकसाथ पनि गरिन्छ ।
सबैभन्दा बढी कुन देश मनपर्‍यो ?
मलाई बेलायत मनपर्‍यो । किनकि, त्यहाँ धेरै पुरानो संस्कृति छ । लन्डन आफैँमा सुन्दर सहर पनि हो । युरोपका अन्य मुलुकभन्दा बेलायत पृथक छ । बेलायत नेपाललाई माया गर्ने मुलुक पनि हो ।
नेपालको कुन–कुन ठाउँ घुम्न सिफारिस गर्नुहुन्छ ?
घुम्न जाने ठाउँ समयले निर्धारण गर्छ । र, खर्चमा पनि भरपर्छ । छोटो समयमा घुमफिर गरेर रमाउन पोखरा, चितवन, लुम्बिनी बढी उत्तम हुन्छ । यी ठाउँमा सडकयात्राबाट पनि छिट्टै पुग्न सकिन्छ । मुस्ताङ, एभरेष्ट बेसक्याम्प, अन्नपूर्ण सर्किट, रारा, फोक्सुन्डो, लाङटाङ घुम्न बढी रमाइलो हुन्छ । म त भन्छु, नेपाली भएर जन्मिएपछि एकपटक मुस्ताङ, सगरमाथा, रारा पुग्नैपर्छ ।
नेपालीमा घुमफिर गर्ने संस्कृति कस्तो पाउनुभएको छ ?
पछिल्लो समय नेपाली घुम्न थालेका छन् । पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, बर्दिया, मुस्ताङलगायत ठाउँमा नेपालीकै बाहुल्यता देखिन्छ । नेपाली पर्यटनमा आन्तरिक पर्यटकको योगदान बढ्दै छ ।